Semalt Expert: Fomba efatra hisorohana ny loza mananontanona ny ransomware
Ny heloka bevava ataon'ny ransomware dia misy fiantraikany amin'ny olon-drehetra ao amin'ny departemantan'ny polisy amin'ny casinos amin'ny hopitaly. Mba hiatrehana io olana io dia ilaina ny famatsiana vola be.
Ireo mpangalatra Cyber ​​avy amin'ny konferansa dia miala amin'ny fomba fanao taloha hanamboarana ny fiainana manokana indrindra indrindra ny fangalan'ny kaonty amin'ny banky sy ny carte de crédit ho an'ny Ransomware. Ny Cyber ​​Threat Alliance dia manasongadina ny vidin'ny famerenana ny angon-drakitra sy ny fanimbana ny ordinatera ho toy ny fahasimbana lehibe vokatry ny virosy - umzug firma schreiben.
Ryan Johnson, Mpanazatra ny Semalt Digital Services, dia mamaritra ny dingana tokony horaisinao raha manohintohina ny fanafihana Ransomware ianao.
Iza no tanjon'ny Ransomware?
Ransomware dia mikendry ireo orinasa ireo izay miankina amin'ny fahafahana mahazo vaovao manan-danja lehibe ary tsy afaka miasa raha tsy misy azy isan'andro. Noho izany, ireo sampam-panjakana, hôpitaly, airlines, sampan-draharahan'ny mpitandro filaminana, ary banky dia tokony hahaliana indrindra momba ny Ransomware.
Na izany aza, ny fanafihan'ny Ransomware dia mifantoka amin'ireo mpampiasa tsirairay ihany koa ary etsy ambany dia soso-kevitra izay mety hampiharina aminao koa.
1. Araka ny lazain'ny Big Sean, avereno ny data
Ny fomba fiasa tsara indrindra amin'ireo mpanafika dia mila miantoka ny fahalemenao amin'ny loza mitatao. Noho izany dia tokony hamerina ny angon-drakitrao amin'ny andavanandro ianao mba hahazoana antoka fa raha sendra ny angon-drakitra ny angon-drakitrao dia tsy voatery mandoa vola ianao mba hiditra ao aminy indray. Azonao atao ny mamerina mamoaka ny angon-drakitrao amin'ny servisy backup cloud na amin'ny haba mafy hafa. Na izany aza, ny atidoha dia mahita sehatra ahafahana miditra amin'ny angon-drakitra. Zava-dehibe ny manamarika fa ny rafitra mpanohana dia tsy mahatonga ny fanafihana Ransomware ho tsy dia mampalahelo satria afaka afaka andro vitsivitsy hamerenana indray ny angon-drakitra, mandritra ny fotoana mety hijanonan'ny raharaham-barotra na ny tsy fahampiana.
2. Mialà amin'ny rohy sy ny mailaka mampiahiahy
Ny fametrahana fototra momba ny solosaina finday amin'ny Ransomware dia fanafihana phishing, izay miteraka ny fanimbana ilay niharam-boina miaraka amin'ny mailaka voaloton'ny fakana an-keriny. Ohatra, ny fanafihana farany nataon'ny Ransomware natao tamin'ireo mpikambana ao amin'ny Kongresy dia nanery ny mpiasan'ny House IT mba hanakanana ny fidirana amin'ny kaonty mailaka Yahoo, izay nampiasan'ireo mpanafika ho fantsom-pahitalavitra ho an'ny phishing.
3. Ny paty sy ny sakana
Ankoatra ny fametrahana rafitra fiarovana, ny orinasa dia tokony handray fepetra fiarovana hafa toy ny fandrakofam-pahamendrehana an-tserasera mba hiarovana ireo fampiharana maloto amin'ny fanodikodinana azy ireo hampiasa ny ordinatera.
Ny fomba hafa izay azon'ny mpampiasa tranonkala atao dia ahafahana mamela ny fahazoan-dàlana hametrahana ny fahazoan-dàlana hahazoana antoka fa tsy misy ny rindrambaiko napetraka ao amin'ny rafitra raha tsy misy ny fahalalana an'ilay mpitantana. Ny tolotra redundante dia azo ampiasaina amin'ny mpitantana ihany koa mba hampisehoana ny fidirana amin'ny fampahalalana manan-kery manohitra ny famelana ny ankamaroan'ny fampahalalàm-baovao momba ny fidirana amin'ny serivisy tokana.
4. Efa voajanahary ve? elektrônika
Manome soso-kevitra momba ny takian'ny hajia ny mpiasan'ny administratera fa tokony hanala ny rafitra misy ao amin'ny tambajotram-pandraharahana ny administrators ary manidy ny Wi-Fi sy Bluetooth amin'ny milina mba hanamaivanana ny tahan'ny fahantrana.
Taorian'izay, ireo antokon'olona voakasik'izany dia tokony hamantatra hoe ny fandosiran'ny Ransomware dia nanimba ny rafitra. Raha fantatrao ny vahaolana dia afaka manampy anao hamaha ny rakitra ireo orinasa miady amin'ny viriosy toy ny Kaspersky Lab.